Ukulungiswa Kwezinwele Ngendlela Yesintu – The Ulwazi Programme
Ukulungiswa Kwezinwele Ngendlela Yesintu
Ukulungiswa kwezinwele noma ukucwala kwezinwele kwakubalulekile emandulo ukuthi umuntu abukeke kahle. Namanje lokhu kuyabonakala kwenzeka noma sekwashintsha kakhulu kunalokho okwakwenziwa esikhathini sakudala. Esikhathini sakudala ukulungiswa kwezinwele kwakunezigaba ngabantu. Izingane zabafana namantombazane zazinezindlela zazo ezicwalal ngazo izinwele ezehlukile kunalezo zabantu abadala asebeshadile. Nokuhlukanisa abantu emphakathini ngokwezinga abakulo empilweni kwakubonakala ngakho ukucwala noma ukulungiswa kwezinwele. Yayingekho imithi eminingi uma uqhathanisa naleyo esetshenziswa njengamanje babesebenzisa amafutha kanye nezinye izinto zemvelo njengamatshe nomlilo ukulungisa izinwele zabo. Lokhu kwakubizwa ngokuthi ukutilesha (stretch) ngoba izinwele zaziluleka zicwebezele bese beyakwazi ukuzihlobisi nganoma yini abayithandayo. Isikhathi esiningi abantu izinwele babezilungisa uma kuzoba nemicimbi emikhulu noma bezoya emaceceni noma ngezikhathi zamaholidi kaKhisimusi lapho izinsizwa nezintombi zazidlisela kulabobantu ekungaba yizimbangi noma yizithandwa zabo.
Igoda – Lokhu ukuluka izinwele zibe yimiqhino. Esikhathini sakudala kwakuthi uma sebeyilukile bayithandele ngelala ukuyihlobisa kodwa ngesinye isikhathi iyayekwa ingenziwa lutho.
Ukuphotha – Izinwele ezelukwa zibe yimiyeke ephothene. Kuyabizwa ngokuthi yimiyeko. Loluhlobo lusesitayeleni esikhathini sanamuhla futhi ungaluhlanganisa nezinwele zama Rasta noma izangoma.
Amanqenqe – Izinwele ezilukwe zaba imibundu emikhulu. Lokhu kwakwenziwa ngabafana esikhathini sakudala. Igama esekubizwa ngakho manje amabhongo kwenziwa ngabafana namantombazane.
Umpendlemana – Ukugunda izinwele kushiywe isiqhova kukhakhayi ngasesiphongweni. Kwezinye izindawo abazigundi izinwele kodwa bayazikama bazibhekise phezulu zibe yindunduma. Lokhu kubuye kubizwe ngokuthi yisiphomoliya.
Impithi – Ukumbambatha izinwele zibe ngamaqhakuva amancane noma ukuzonya noma ukuhlokohla iziwele zibe amanqakide. Kubuye kwaziwe ngokuthi umzonyo.
Umqhino – Izinwele zilukwa zibe ngamaqoqo, kube yilelo qoqo nalelo lihlanganiswe ngokwenza safindo. Kwenziwa kakhulu ngabantu besifazane kodwa esikhathini samanje nabantu besilisa sebeyakwenza.
Isibhaca – Izinwele ezelukwa zibe nezindlela eziningi ziboshelwe phansi, kwesinye isikhathi ziboshwe nangohala zibe ngamaqokodo amahle.
Isicelankobe – Izinwele ezilungiswa zase zilengela eziphongweni.
Isiguqa – Ukugunda zonke izinwele ezinganeni ziphucwe kodwa kusale isiqhovana esincane phambili. Lokhu kwakwenziwa ezinganeni zabafana.
Isihluthu – Izinwele ezinkulu ezicwalwayo zigcotshwe nangamafutha zibheke phezulu zingelukwa. Ezikhathini zakudala kwakuvamise ukwenziwa ngabantu besilisa kodwa manje nabesifazane bayakwenza.
Isiyendane – Izinwele eziphothiwe kwathi amachopho emiyeko ifakwa ubuhlalu noma aboshwa ngelala. Lokhu kwenziwa kakhulu ngabantu besifazane.
Abantu besilisa nabesifazane asebeganile
Amangenge – Ukushaya imiklezo eyehla nekhanda kodwa kushiywe isiqhova sezinwele phezulu. Kubizwa ngokuthi amantentezo.
Ungiyane – Isongo elikhulu elenziwa ngomuthi, isihlahla, licwebezele bese lithwalwa ekhanda ngamadoda asekhulile. Kuthiwa futhi isicoco.
Inhloko – Izinwele eziphushelwe phezulu zase zikhehlwa zifakwa intshohi sezizongolozwa ngozi. Kwesinye isikhathi inhloko igqagqelwa ngobuhlalu. Ziyahluka ngokwezindawo ukwakhiwa kwazo izinhloko ngoba emachunwini ziyisicaba kanti oSuthu zicijile phezulu. Inhloko ikhehlwa ngomakoti, amakhosikazi kanye nezingoduso. Kuthiwa futhi inkehli.
Isicelankobe – Inkosikazi eganile kayiziphuci izinwele kodwa ishiya imiyeko ehlotshiswa ngobuhlalu namakhonco ethusi.
Categories Culture Tags Ekhaya, hair, Home, izinwele
3 thoughts on “Ukulungiswa Kwezinwele Ngendlela Yesintu”
I am happy of the knowledge I have recieved it has somehow clarified some of my concerneds about my hair and it generic look,
Good to know it was helpful, and thank you for your comment!
Sibonge sinconcoze ngalolu lwazi osicobelela lona.